कृष्ण थापाकै प्रवृत्तिमा जनार्दन !
विष्लेषकहरुले भन्ने गर्छन् नेपालमा सामाजिक व्यवस्था नमुना योग्य छ । यसो भन्नेहरु मुलत दुईवटा तर्कहरु पेश गर्ने गर्छन् । एक जातिय हिसबाले कुने हिंसा भएको छैन, एक जाति ले अर्को जातिको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ र दोस्रो तर्क हुन्छ धार्मिक सहिष्णुता छ । मेरो विचार यो अति सतहि छ । खासमा यस्तो हुदै होइन । सामाजिक तथा धार्मिक एकता त छ तर यो कसरी संभव भयो भने एक पक्षले विभेदलाई स्विकार गरिदयो कथित माथिल्लो जातिको दमन। अल्पसंख्यक हुनु ,राजनितिक तथा आर्थिक अधिकार नदिनु, जति उत्पिडन परे पनि आवाज बुलन्द गर्न नसक्नु कथम कदाचित आवाज बाहिर आए अनेक संयन्त्र प्रयोग गरेर थप पिडनमा पारेर मनोबैज्ञानिक रुपमै कमजोर बनाईन्छ । यसैलाई नमुना योग्य सामाजिक व्यवस्था भनिएको छ । यो एक अन्यापूर्ण सामाजिक व्यवस्था हो ।
४ वर्ष अघि अर्थात २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजारको गाडिएको सब धादिङको मलेखु नजिकै भेटियो । प्रहरिको २४ ‍घन्टा उपस्थिति रहने ठाउँमा उनको झुन्डिएको भनिएको लाशलाई प्रहरिकै योजनामा गाडियो र विरोधपछि उत्खनन गरियो । न्यायको पर्खाइमा उनको लाश आज महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालमा पर्खिरहेको छ ।एक कथित उपल्लो जातको केटीसंगको प्रेम सम्बन्धका कारण ।
यसैको झल्को दिने गरि रुकुममा घटेको कहालि लाग्दो घटनाले मथिङगल नै रन्थानाइदिइको छ । यो एक घोर अपराध कतै अजित मिजारकै जस्तो त हुने होईन शंका गर्ने ठाउँ पैदा भएको छ । जनयुद्धको बेलाको एक पक्षले अर्को पक्षलाई भाग्नको निम्ति भिर, पहारा तथा खोला भएको भाग छाडिदिन्थे जसले गर्दा भाग्ने समुह तेहि बाटो भागोस् ,आक्रमण गर्न सजिलो होस् र थप क्षति होस् । यस्तै ट्याक्टिकल योजनालाई सम्झाउँछ रुकुम घटनाले । युवाहरु आएको थाहा पाएपछि खानेपानीको बैठकमा बसेका व्यक्तिहरु, भलिवल खेलिरहेका युवाहरुले योजना मुताविक आफ्नो एरिया भित्र प्रवेश गराउँछन् र भाग्नको निम्ति भेरी तर्फको बाटो खुला गरिदिन्छन् पुल र अन्य सहज बाटोमा अवरोध सिर्जना गरिदिन्छन । योजनाबद्ध भएको यो घटनाले नरसंहारको झल्को दिन्छ । जनयुद्धको अन्तिम युद्ध जनार्दनको नेतृत्वमा भएको तत्कालिन शाहि सेनासंग भएको भिडन्तको याद दिलाउँछ यो घटनाले जहाँ सेनाहरुलाई बाँदारे भिर बाँकि राखेर चारैतिरबाट आक्रमण गरिएको थियो । दोरम्बा हत्याकान्डको झल्को दिन्छ यो घटनाले जहाँ तत्कालिन शाहिसेनाले छङ्गासुर भिर बाँकि राखेर निहत्था कार्यकर्तालाई भिर तिर धकेलिदिन्छ । यो जनयुद्धकालिन अवस्था त होईन तर पनि सायद यो योजना बुन्न माहिर थिए सोति गाउँका मान्छेहरु ।
घटनालाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण
यस घटनालाई आफ्नै आफ्नै दृष्टिकोणले व्याख्या विष्लेषण गरिएको छ र गर्न सकिन्छ । वर्ग चेत भएका र मानविय संवेदना भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरु जो गैरदलितहरु पनि छन् उनिहरुले यस घटनालाई लज्जाको रुपमा हेरेका छन् अर्को झुन्ड पनि छ जो जातगत व्यवस्थामा उच्च वर्गमा छन् र तिनले यो व्यवस्थालाई कालान्तरसम्म टिकाई राख्नु छ यसैको आडमा लुट्नु छ उनिहरुले घटनालाई विषयान्तर गर्नको लागि तपशिलका प्रश्न उब्जाएको छन् ।
प्रश्न १. यत्रो फौज गाउँ भित्र किन पस्यो ? हो त यस्तो पनि लाग्छ । यदि यस्तो लाग्छ भने नवराज र शुष्माको विगतका घटनातिर जान जरुरी छ । नवराज एक प्रतिभावन खेलाडि थिए । सोहि शिलशिलामा शुष्मासंग उनको भेट भयो सो भेट प्रेम सम्बन्ध परिणत भयो। शुष्मा २ पटक नवराजको घरमा पुगिसकेकि थिइन । पछिल्लो समयमा शुष्माको अर्कैसंग विवाह हुने भएपछि शुष्माले नवराजलाई खबर गरेकि थिईन । नवराज जानकार थिए कि सजिलै शुष्मालाई लिएर आउन संभव छैन र फेरि यो भन्दा अगाडि उनले यहि सम्बन्धका कारण तनाव वेहोरेका थिए ।तेसैले उनले साथिहरुको मदत लिएर गएका थिए ।
प्रश्न २. लकडाउनमै किन ? लकडाउनले सामाजिक सस्कार रोकिदैन र रोकिएको पनि छैन । यो लकडाउनको अवधिमा विवाह भएको छैन र ? सायद नवराजलाई हतार थियो कतै लकडाउन सकिने वित्तिकै शुष्माको अरुसंगै विवाह त हुँदैन त्यसैले उनको बोलावटमा लकडाउन बाधा बनेन ।अझ यसको डिटेल जानकारी त स्वतन्त्र छानविन पछि थाहा हुँदै जाला ।
प्रश्न ३. भेरिमा हाम फालेर ज्यान गएको हो ? केटिको घरमा युवाहरु उभिएका थिए वडा अध्यक्ष घरमै आइपुगे तिनलाई देखेर केटाहरु फाल हाले मानौ कि केटीको आँगनको डिलमै भेरि नदि बगेको थियो र केटाहरु भ्यागुता जस्तै फुत्त हाम फाले । सत्य त यो हो कि ४ किलोमिटर सम्म बगरैवगर लखेटिएको थियो र मृतकमा घरेलु हतियारको प्रयोग भएको देखिन्छ ।घाईतेहरुको भनाईबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
प्रश्न ४. रातको समयमा किन ? यो पनि घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रश्न हो । नवराजको घरबाट सोति पुग्दा समय घर्किसकेको थियो । फेरि पनि यो रातको समय थिएन र केटाको समुह घरसम्म नपुग्दै घेराबन्दिमा पर्दा ६ बजेको थियो । मानिलिउँ कि रातमै पुगेका थिए भने पनि रातिमा पुगेका जति सबैलाई मार्न पाउने कानून छ र ?
प्रश्न ५. यदि केटिले चाहेको भए घरबाहिर वा धेरै बाटो केटी आफै आउने थिइन । यो प्रश्नले हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । केटिले चाहाँदा धेरै कुरा हुन्छ जस्तै लाग्छ तर यसलाई यसरि हेरौ । केटा र केटीको परिवारवीच यो मामिलामा लफडा थियो अतःकेटिलाई बन्दक जस्तै बनाइएको थियो । अन्तरजातिय विवाह मात्र हैन सजातिय विवाहमा ( हुन त म यसलाई सजातिय नै मान्छु) पनि यस्तो बेला केटिलाई नै बन्दक बनाईन्छ । अत उनि घरबाट निस्कन सक्ने अवस्था थिएन । यो पितृसतात्क सोचको उपज हो ।
प्रश्न ६.केटाहरु हतियार सहित लुटपाट गर्ने योजना पनि थियो ? घटनाबाट घाईते भै बाँचेका र भागेका सबैको भनाईबाट पुष्टि हुन्छ यस्तो कुनै योजना थिएन । घटनास्थलमा केटाहरुबाट यौटा पनि हतियार लाठि केहि पनि बरामत भएन । कुनै खालको प्रतिकार पनि भएन । ज्यान जोगाउनलाई सबै तितरवितर भै भागेका थिए ।
३ जनाको हत्या ३ जनाको वेपत्ता पछि पनि अझै घटनालाई तोडमोड गरिनुको रहस्य के होला ? के लकडाउन उल्लङघन गरे भनेर यसैको निहुँमा बाँकी बाँचेकालाई कानून लगाउने हो ? राज्य कसका लागि? थप विद्रोह हुने वातावरण नवनाईयोस कुनै पनि वहानामा मान्छे मारिनु हुँदैन । स्वतन्त्रपूर्वक छानविन गरियोस ।
कृष्ण थापाकै रुपमा जनार्दन
पोखराका मोहन सुनार माथि भएको ज्यादतिका सन्दर्भमा जातिय सद्भाभको भाषा बोलेर पिडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन प्रयास गर्ने कास्कि नेकपाका अध्यक्ष कृष्ण थापाकै अर्को रुप हुन रुकुम कान्डका जनार्दन शर्मा । शक्तिशालि नेकपाका नेता जनार्दन । यिनको आदेश वा ईच्छा विना रुकुममा केन्द्रिय सरकारि संयन्त्रले सिन्को सम्म भाँच्न सक्दैन । त्यसैले त भन्ने गरिन्छ रुकुममा जनयुद्ध त भयो तर गणतन्त्र आएको छैन ।रुकुम सन्दर्भमा यिनले संसदमा बोलेको भाषाको भावलाई बुझ्ने हो भने – यो एक सामान्य घटना हो छानविन पछि स्वतः मिलिहाल्छ । याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने संसदमा जनार्दन मात्रै छैनन् तर्कमा तर्क गर्न सक्ने खिम कुमार विक, प्रकाश रसाईलि, मिन विश्वकर्मा, पार्वती विसुङखे लगायतका अन्य गैर दलित सांसदहरु पनि छन् ।
अझै घटनालाई तोडमोड गरिनुको रहस्य के होला ? के लकडाउन उल्लङघन गरे भनेर यसैको निहुँमा बाँकी बाँचेकालाई कानून लगाउने हो ? राज्य कसका लागि?
राजनीतिको उच्च तहमा पुगेका राजनीतिमा योगदान पनि दिएका भनिएका यि दुई पात्र एकाएक कसरि यस्तो चरित्र प्रदर्शन गरे त ? यसको धेरै तहबाट विष्लेषण गर्न सकिन्छ २०७६ माघमा नेकपाले जारि गरेको ११ बुँदे आचार सहितालाई गौर गरेरे हेर्ने हो भने केहि बुँदामा जातिगत व्यवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न खोजिएको छ जुन सम्मानयोग्य छ तर कास्किका आफ्ना अध्यक्षलाई कार्वाहि त परै जाओस एक शब्द किन? भनेर प्रश्न गर्न नसकेको नेकपा कागतमा रहेको आचार सहितालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ला ।
यदि यिनलाई कार्वाहि गर्ने मात्र प्रयास गरेको भए आज जनार्दनले घटनालाई ढाकछोप गर्ने गरि संसदमा कुर्लिदैनथे । अझै फेरि जनार्दनलाई किन? भनेर प्रश्न गर्ने आट नगर्ने हो भने अरु कृष्ण थापा र जनार्दन शर्माहरुले जातिय सद्भाव कायम राख्ने नाममा यो प्रवृत्ति देखाईरहनेछन् । नेकपाकै संसदीय भविष्य सुनिश्च गर्ने हो भने यस तर्फ पाटिको ध्यान जाओस । मानव जातिको सभ्यता र संस्कारलाई परिष्कृत बनाउने र सभ्य समाजको निर्माण गर्ने सबै व्यक्ति यस घटनाको निन्दा गर्न जरुरि छ । अन्यथा एक समय यस्तो आउनेछ पूर्वजका कारण भावि पुस्ताले माफ माग्न समेत आँट गर्ने छैन ।
बुधबार, जेठ १४, २०७७, १७:०५:००